We She Me: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံးများ
khin oo may - 9/28/08, 12:04 AM
khin oo may - 9/28/08, 12:05 AM
imaginary clouds no2- 9/28/08, 12:21 AM
အန်ဒီရေ ဖတ်သွားတယ်ဗျို့ ။ ခင်ခင်မင်မင်နဲ့ရေးပေးတာကျေးဇူးပါဗျ။ ကျနော်နည်းနည်းဝင်ရှည်ဦးမယ်ဗျာ ။ ကျနော်ဖတ်တဲ့ ကြိုက်တဲ့ ကာတွန်းတွေထဲမှာ ဒီလုံး ပါတယ်ဗျ ။ မောင်တီထွင် ။ ' ငတက်ဖျား' ။ (အဲသလိုစာလုံးပေါင်းမယ်လို့ထင်တာပဲ ) ။ သူပုံတွေက သိပ်မိုက်တယ် ။ အိမ်မှာသိမ်းထားတာ တစ်အုပ်၊ နှစ်အုပ်ရှိဦးမယ်ထင်တယ် ။ နောက် အကြိုက်တစ်ခုက အရိုင်း ။ ဆရာသော်က အရင်ရေးတဲ့ အရိုင်း ။ ကျနော်သိပ်ကြိုက်တယ် ။ ရေအောက်မှာ မိချောင်းနဲ့ သတ်တာတို့ ။ အခုထိမှတ်မိတာကတော့ ၊ရေငုတ်တာတို့ ၊ ရေ ငုတ်ဖို့ ပြင်ဆင်ကြတာတွေပါ။ အရိုင်းစာအုပ်တွေပြန်တွေ့ရင် ကျနော်ဘလော့ပေါ် တင်ချင်သေးတယ်။(မပန်ဒိုရာ စတိုင်နဲ့ပြောရရင်တော့ ကာတွန်းလောကကို ပြန်သွားချင်မိတယ် ငှက် ငှက် ငှက်---)
nu-san - 9/28/08, 12:51 AM
Andy တို့ရဲ့ ပထမဆုံးတွေကို လာဖတ်သွားတယ်..အတော်လေးမှတ်မိတာပဲ.. အမကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ရွှေသွေး၊ မိုးသောက်ပန်း၊တေဇ တွေ ဖတ်ဖူးတာ မှတ်မိပေမယ့် ဘာစာအုပ်ဆိုတာ သေချာ မသိတော့ဘူး။ သီချင်းတွေဆိုရင်လည်း အဲဒီလိုပဲ.. သူငယ်ချင်းနာမည်တွေလည်း မမှတ်မိ။ ကလေးတို့မေမေ သီချင်းဆိုတဲ့ပုံ ထည့်ပေးပါဗျို့.. :D
pandora - 9/28/08, 12:52 AM
မှတ်မှတ်ရရ လေယဉ်ပေါ်မှာ Apple Juice ပေးတာကို (ကျွန်တော် တောင်းထားတဲ့) Whisky ထင်ပြီး သောက်ကာ မူးနေလိုက်တယ်ဆိုတာ။
ဟဲဟဲ ဒါကို သဘောကျသွားတယ်။ ဆိုက်ကိုပေါ့လေ။
မောင်တိန်ရေ ကိုယ်လည်း ကာတွန်းလောကသားပါပဲ။ လောကပေါင်းစုံမှာ ကျင်လည်ခဲ့တာလေ။ အရိုင်းကာတွန်းစာအုပ်တွေ ရော တခြားကာတွန်းစာအုပ်တွေ အိမ်မှာ တချို့သိမ်းထားခဲ့သေးတယ်။ အခုတော့ နာဂစ်နဲ့အတူ...။
khin oo may - 9/28/08, 1:14 AM
တို့ကတော.ပြာလောင် အကြိုက်ဆုံးဘဲ. (မင်း ဘယ်သူ မှ မပြောနဲ. ငါ အားလုံး ကို ပြောပြီးပြီ ကတို့).။ (ဒီကောင် မလေးကို ကြည့်ရတာ ထရံ မှာ လောက်စာလုံး ကပ်ထားသလိုဘဲတိ)ု.
Nu Thwe - 9/28/08, 1:17 AM
တခုတ်တရ တဂ်တာ ဆိုတော့လည်း ခက်သားနော်။ အားလည်းနာတယ်၊ ခင်လည်း ခင်တယ်။ ခဏလေး အချိန်ပေးပါ။ စဉ်းစားပြီး ရေးပါ့မယ်ရှင့်။
မိုးချိုသင်း - 9/28/08, 2:30 AM
ကို Andy တို့ နှစ်ယောက်အကြောင်းလေး ဖတ်ရတာ သဘောကျစရာပါ။
မဒမ်ကလဲ ခေသူမဟုတ်ပါလား၊ ဆရာမ တုတ်ကိုဆွဲပြီး ပြန်ရိုက်တယ် ဆိုတော့..။
ကို Andy ကလဲ Apple Juice ကို Whisky ထင်ပြီးသောက်ပြီး မူးတာ ရီလိုက်ရတာ။ လူရိုးကြီးပဲ :P
star - 9/28/08, 2:44 AM
ကျောင်းအုပ်ကြီးက သူမရဲ့ အဖေဖြစ်ပြီး ဒုကျောင်းအုပ်ကတော့ အမေပါ။ သူမရဲ့ အတန်းပိုင်က သူ့အမေရဲ့ တပည့်........... ဟုတ်နေတာပဲ..ဟားဟား..
အမေရိကန် သမ္မတကို (လားမသိ) လုပ်ကြံဖို့ မိုးပျံပူပေါင်းတွေထဲမှာ.... အဲဒီ စာကြောင်းကို သမ္မတနာမည်က "လားမသိ "ထင်နေတာ။ နှစ်ခါသုံးခါဖတ်မှ သြော်... ဖြစ်သွားတယ်။ ဖတ်လို့ကောင်းပါ့ရှင်
A Linn Nyi - 9/28/08, 3:42 AM
Andy တို့ရေးထားတာ..ဖတ်လို့ကောင်းတယ် လို့ တွေးနေတာ။ အောက်ဆုံးလဲရောက်ရော..တေပြီဆရာဖြစ်သွားတယ် :D
ကိုဇနိ - 9/28/08, 4:39 AM
ကိုအန်ဒီတို့ ရေးထားတဲ့ စတိုင်လေးမိုက်တယ်...
Anonymous - 9/28/08, 5:49 AM
သဒ္ဓမ္မရံသီ ရိပ်သာဖြစ်မယ် ကို Andy..
Anonymous - 9/28/08, 11:33 AM
ဟေး ဒီဝိုင်းစာအုပ် ဂျစ်လည်းကြိုက်တယ်ဗျို့။ ကိုမောင်တိန်ပြောတဲ့ မောင်တီထွင်လည်း ကြိုက်တာပဲ ။ ရွှေသွေး တေဇ မိုးသောက်ပန်းလည်း မလွှတ်တမ်းဖတ်ခဲ့တယ် ။ ရွှေသွေးပေါင်းချုပ် ခုတောင် ပြန်ဖတ်ချင်လာပြီ ။
အဟိ .. အမကလည်း မခေပါလား ။ ကျောင်းအုပ်က အဖေ ၊ ဒုကျောင်းအုပ်က အမေ ၊ ဆရာမက ငယ်၂တည်းက ထိန်းလာတဲ့သူ .. အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို သိပ်သဘောကျနေတယ် ။
Apple Juice သောက်ပြီး မူးတတ်တဲ့လူသားတယောက်ကို တွေ့ သွားပြီ ။ ဒါဆို hypnosis လုပ်လို့ရတာ မှန်နိုင်တယ် ။ ဆိုက်ကိုက အရေးကြီးတဲ့ သဘောပဲ ။
JulyDream - 9/28/08, 2:31 PM
လို့ ရေးထားတော့... အဲဒါတွေက ဆက်လာအုံးမှာလား ခင်ဗျ။ မကြာခင် မျှော်ဆိုရင်တော့ မျှော်လိုက်ပါအုံးမယ် ခင်ဗျာ။
Kay - 9/28/08, 3:45 PM
အား-- အကုန်လုံး..ပထမ တွေ ပေါ် ကုန်ပြီပဲ။
သူမ ကိုတော့..သဘောကျ သွားပြီ..ကိုအန်ဒီလည်း..သတိထားနော်။ အဟဲ-
သက်ဝေ - 9/28/08, 4:12 PM
ကိုAndy တို့ ရဲ့အများကြီးကျန်နေသေးတဲ့ ပထမဆုံးတွေ ဆက်ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်...။
Andy Myint - 9/28/08, 5:55 PM
အလန့်ထညက်ပါလား မခင်ဦးမေရဲ့ အခုမှ တွေ့ဖူးတဲ့ သူတွေကျနေတာပဲ။ ရေးပေတော့ ပထမဆုံးများ
အရိုင်းရဲ့ ငယ်စဉ်ဘ၀ (သူ့ကို တောထဲမှာ ပစ်ထားပုံ၊ မျောက်ဝံမကြီးက ကျွေးမွေးပြုစုထားပုံ၊ အဲဒီ မျောက်ဝံမကြီးကို သူက ကျေးဇူးကန်းမိပြီ ဖမ်းဆီးပြီး လူတွေလက်ထဲ ထည့်လိုက်တဲ့ ကာတွန်းကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။) ကျွန်တော်ဆီမှာ ရှိဖူးတယ် မောင်တိန်။
ဟီးဟီး သူမက ဆွဲနေလို့ မထည့်တော့ပါဘူး မနုစံရယ်။ ဟုတ်တယ် မိုးသောက်ပန်းလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စွဲစွဲမြဲမြဲ မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ နောက်ပြီး သူက ၇ တန် ၈ တန်းလောက်မှ ဖတ်ဖြစ်တာ။
ဟုတ်တယ် မပန်။ Apple Juice လည်း အဲဒီမှ စသောက်ဖူးတာလေး။ Apple Juice မှန်းမသိဘဲ Whisky ထင်ပြီး ဇိမ်ပြေနပြေသောက်ပြီး တကယ်ကို မူးနေတာ။ နောက်တစ်ခေါက် ၁ လလောက် အကြာမှ Apple Juice ထပ်သောက်တော့မှ ဟင်.. ငါလေယဉ်ပေါ်မှာ သောက်လာတာ Whisky မဟုတ်ဘဲ Apple Juice တွေ ဖြစ်နေပါလားလို့ သိလိုက်ရတာ။ ဖြစ်ပုံက အဲလို။
ကိုယ်မပြောချင်တဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေပေါ့ မနုသွဲ့။ အေးဆေးရေးလေ။
ဟုတ်ပ မချိုသင်းရေ။ မဒမ်က စိတ်ကြီးတယ်နော်။ ငယ့်ငယ့်ကတည်းကပဲ။ ကျွန်တော်က လူရိုးကြီး မဟုတ်ပါဘူး အစ်မရယ်။ အစ်မ ထင်လို့ပါ။ ဟီးဟီး
ဟုတ်တယ် Star။ မြန်မာပြည် ပညာရေး လောကမှာ ရှားရှားပါးပါးပဲ။ လင်မယား ၂ ယောက်ကို ကျောင်းအုပ်နဲ့ ဒုကျောင်းအုပ် မခန့်ဘူး။ သူ့အဖေကို ယုံလို့ အဲဒီလို ခန့်ပေးထားတာတဲ့။ ဆရာမကို ပြန်ရိုက်တာလည်း မြန်မာပြည် ပညာရေး လောကမှာ ခပ်ရှားရှားပါပဲ ဟဲဟဲဟ
တေပြီ ဆရာ...ဟားဟား။ အလင်းညီ ရေးတာလည်း ဖတ်ချင်လို့ပါ။
တရားစခန်းဝင်ပြီး တရားပေါက်သွားရင် မဇနိကို ပစ်သွားမှာလား ကိုဇနိ။
ကျေးဇူးတင်တယ် မရှင်မင်းညို။ ပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ မှားနေမှန်းတော့ သိတယ်။ အမှန်ကို မသိတာ. ဟီးဟီး
ရွှေသွေးပေါင်းချုပ်တွေကတော့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တကယ့်ကို Collection ပါပဲ တီတီဂျစ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ရွှေသွေးတွေက အရင်က ဟာတွေလောက် ဖတ်လို့ မကောင်းတော့ဘူး။ Apple Juice သောက်ပြီး တကယ့်ကို မူးနေတာ။ ဒါတောင် အရက်သောက်သလို နည်းနည်း နည်းနည်း သောက်၊ ပြီးတော့ ရေပါ တောင်းသောက်လိုက်သေးတယ်။ ဟားဟား။ နောက်အတော်ကြာမှ လေယဉ်ပေါ်မှာ သောက်လာတာ Whisky တွေမဟုတ်မှန်း ပြန်သိတာ။
အဲဒါတွေက ဆင်ဆာ မိသွားလို့ JulyDream ဟီးဟီး
ဟုတ်တယ် မကေရေ။ ဘူးပေါ်သလိုကို ပေါ်ကုန်တာ။ ကျွန်တော်ဆို သူမကို ဘယ်တော့မှ တုတ်နဲ့ တောင် မရ္ဂွယ်ရဲဘူး။ ချစ်လွန်းလို့ ဆိုတာထက် သူ့ဆရာမလို ပြန်အဆော်ခံ ထိမှာ စိုးလို့ ဟီးဟီး။
ဟီးဟီး အဲဒါတွေက စာပေစိစစ်ရေးမှာ ကျန်ခဲ့တယ် မသက်ဝေရေ.. ခေတ်ကောင်းတဲ့ အခါကျရင် တင်လိုက်ပ့ါမယ်။
မွန် - 9/28/08, 6:58 PM
သူမရဲ့ ပထမဆုံးရည်းစားနဲ့ ချစ်သူကတော့ Who else? ကျွန်တော်ပါပဲ။ ညှင်းညှင်း ညှင်းညှင်း။
ညှင်းညှင်းညှင်းညှင်း ကိုပြောတာ ဟိ
Anonymous - 9/29/08, 7:41 AM
ထပ်လျှာရည်လိုက်အုံးမယ် ကိုAndy ဟီးဟီး..
ko - 10/1/08, 4:30 AM
Andy Myint - 10/1/08, 8:16 AM
သူမက ကျေးဇူး တကယ်တင်တယ်တဲ့ မရှင်မင်းညို
တန်ခူး - 10/1/08, 12:00 PM
အားကျလိုက်တာ… သူနဲ့ ကျွန်တော်… သူနဲ့ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံးလေးတွေကိုပေါ့… ဒီမှာတော့ တယောက်ထဲရေးရတာ ကိုအန်ဒီရေ… ဒါနဲ့ ကျွန်မနဲ့ စဖတ်တဲ့ ကာတွန်းစာအုပ်လေးချင်းတူတယ်… ရာမလေ…
Andy Myint - 10/3/08, 9:05 AM
ဟီးဟီး တစ်ယောက်တည်း အကြောင်းဆို စိတ်ဝင်စားဖို့ မကောင်းလို့ နှစ်ယောက်ပေါင်းရေးရတာပါ မတန်ခူးရယ်
Anonymous - 2/2/11, 5:58 PM
ကျွန်မဒုတိယရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံက အော်စီ သူဒုတိယ ရောက်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံက မလေးရှား။ ပထမချင်းက တူလို. မရေးတော့ဘူး။ တတိယချင်း တူအောင်ကြိုးစားနေတယ်။ ဟိဟိ။